Meydka marxuum weriye Max’ed Ibraahim Raage oo maanta lagu aasay duleedka magaalada Muqdisho | Salaan Media
Meydka marxuum weriye Max’ed Ibraahim Raage oo maanta lagu aasay duleedka magaalada Muqdisho
Waxaa maanta lagu aasay qabuuraha Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho meydka marxuum ALLAHA u naxariistee weriye Maxamed Ibraahim Raage oo ka mid ahaa shaqaalaha idaacada iyo Tvga ku hadla codka dowlada Somalia kaasoo shalay galab gaabkii ay kooxo hubeysani ku toogteenn hoygiisa oo ku yaala degmada Dharkeynley ka dib markii uu ka rawaxay goobtiisa shaqada.
Aaska marxuumka ayaa waxaa ka qeyb galay Masuuliyin ka tirsan wasaarada warfaafinta, bahda saxaafada, ehelada marxuumka iyo dadweyne fara badan, kuwaasoo salaadii janaasada kula tukaday qabuuraha Jasiira.
Dadka ka qeyb galay aaska ayaa dhamaantood waxaa wejiyadooda ka muuqday murugo iyo tiiraanyo ku aadan dilka loo geystay marxuumka.
Agaasimaha idaacada ku hadasha codka dowlada Somalia ee radio Muqdisho C/raxiin Ciise Caddow woo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in marxuum weriye Maxamed Ibraahim Raage uusan dhiman balse uu ka dhuuntay, isagoo xusay inuu ahaa weriye firfircoon oo shaqadiisa u guta si hufan.
“Dilka loo geystay weriye Maxamed Ibraahim Raage maaha kii ugu horeeyey ee loo geysto weriye, waxaa dishay gacan ka xaq daran, waxaa dilkiisa uu qeyb ka yahay dilalka kooxda shabaab ay ku ciribtireyso dadka bulshada waxgalka u ah sida culumaa’udiinka, waxgaradka aqoonyahanka, ma joojineyno shaqadeena waana ku taaganahay dhiiriggelin ayaan ka sii qaadeynaa” ayuu intaa ku daray C/raxiin Ciise Caddow.
Weriye Maxamed Ibraahim Raage ayaa noqonaya weriyihii 3aad ee sanadkan lagu dilo magaalada Muqdisho, waxaana uu ka soo shaqeeyey idaacado ay ka mid yihiin shabelle, VOD, IRIN iyo qaar kale, waxaana marxuumka oo uu ifka kaga tegay xaas iyo labo caruur ah.